कास्कीमा डेङ्गु नियन्त्रणबाहिर, तीन साताभित्र २८० संक्रमित फेला « Nagarik Khabar
कास्कीमा डेङ्गु नियन्त्रणबाहिर, तीन साताभित्र २८० संक्रमित फेला
प्रकाशित मिति : 26 August, 2019 7:30 pm
पोखरा । कास्कीमा फैलिँदै गएको डेङ्गुको सङ्क्रमण नियन्त्रणबाहिर गएको छ । डेङ्गु नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरोकारवालाले सचेतना एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरे पनि नियन्त्रण नभएपछि सबैलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । कास्कीमा गत वर्ष पनि छ सयमा डेङ्गु देखिएको थियो ।
यस वर्ष तीन साताभित्र २८० मा डेङ्गु देखिसकेको छ । पोखरा महानगरपालिका–८ भित्र रहेको कवाडी सङ्कलन केन्द्रबाट सो रोग फैलिएको बताइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका कीटजन्य रोग निरीक्षक याम बरालले सबै क्षेत्रबाट डेङ्गु नियन्त्रणका लागि प्रचारप्रसार र सचेतना भइरहेको र यति हुँदाहुँदै पनि नियन्त्रणमा आउन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताए ।
“एउटा रोगी लामखुट्टेले सय वटासम्म फूल पार्ने र ती सबै रोगी लामखट्टे जतिले टोक्ने र त्यतिलाई डेङ्गु हुने भएकाले यो जटिल भएको हो”, उनले भने, “मुख्य कुरा पानी जम्न नदिने, पानीलाई छोपेर राख्ने, घरवरिपरिका निर्माण सामग्रीलगायत अन्य सामग्री खुला रुपमा नराख्ने, पानी जम्न नदिने हो भने धेरै नियन्त्रण हुन्थ्यो ।” यो स्वास्थ्य कार्यालयको मात्र विषय नभई सम्पूर्ण नागरिक आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजकता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका सिनियर मेडिकल अफिसर डा भोजराज गौतमले पोखरा–८, ९ र १७ मा धेरै बिरामी पहिचान भएका बताए । “हामी निरन्तर यस रोग नियन्त्रणका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिएका छौँ, नियन्त्रणमा ल्याउने हाम्रो प्रयास जारी छ”, उनले भने ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेका अनुसार डेङ्गु लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने रोग हो । जसमा टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, मांसपेशी तथा जोर्नी धेरै दुख्ने, ग्रन्थी सुन्निने र शरीरमा बिमिरा निस्कनेजस्ता लक्षण देखिने उनले बताए ।
ज्वरो, बिमिरा र टाउको दुखाइ यी तीन लक्षणलाई डेङ्गुको त्रिभुज मानिन्छ । यसबाहेक डेङ्गुले गिजाबाट रगत आउने, आँखापछाडि असह्य पीडा हुने तथा हत्केला र पैताला राता हुन्छन् । यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई सजिलै लाग्न सक्छ । विशेषगरी रोगमा मांसपेशी तथा हड्डीमा निकै पीडा हुने भएकाले यसलाई ‘ब्रेकबोन’ ज्वरो पनि भन्ने गरिएको डा. पाण्डेले बताए ।